Full Video Concepts nke iPhone 6s (Plus)
Asịrị e agbasa si banyere ọzọ-emana iPhones maka gara aga afọ nke a na-atụ anya ga-tọhapụrụ a September. N'ịga n'ihu na-emekarị site 2014 mgbe Apple agbam onya iPhone 6 & 6 Plus, ọ na-atụ anya na Apple ga hapụ abụọ iPhones afọ a dị ka mma. Ha na-atụ anya ga-aha ya bụ iPhone 6s na 6s Plus (ma ọ bụ iPhone 7 ebe ọ na-adịghị tụgharịa anya ire ezi mfe). Imewe nke ọhụrụ iPhones a dịghị atụ anya ịgbanwe. Dị ka akụkọ ihe mere eme nke gara aga iPhone releases, na iPhone imewe naanị agbanwe ọ bụla ọgbọ abụọ.
Ihuenyo size na-atụ anya ịnọgide na-4.7 sentimita asatọ - ahụ dị ka size nke iPhone 6. ụfọdụ mpụga mgbanwe na-atụ anya ka a. Okwu gburugburu obodo bụ na Apple ga-enye a ọhụrụ nhọrọ maka agba akpọ bilie gold. Igwefoto na azụ na-atụ anya-kwalite ka 12MP site ugbu a 8MP nke bụ ịrịba mma. Anyị pụrụ ịtụ anya 4K video ndekọ na n'azụ igwefoto. Anyị na-atụ anya na-ahụ ihe nweta nkwalite ka 2GB Ram na A9 processor, site ugbu a 1GB na A8. Ihe ọzọ okwu na-atụ anya na-kwukwara na azụ welie olu mma. The iPhone 6s (Plus) na-speculated iji kwalite Touch ID nke ga-ebelata ịgụ njehie si otú rụọ ọrụ ndị Apple Ṅaa ahụmahụ.
Asịrị multiple isi mmalite kọrọ na iPhone 6s (Plus) na-atụ anya ekwukwa Force Touch technology. The Force Touch atụmatụ akpa ẹkenam na Apple Watch nke jikoro larịị nke nrụgide ma ọ bụ ike n'ọrụ site ọhụrụ mmegharị. Na mgbakwunye na nke ike sensọ na ngwaọrụ, ọhụrụ iPhone na-atụ anya ịbụ otu obere thicker. Images na schematics e leaked site a ọrụ na Apple si ọkọnọ yinye ngalaba na China. The oyiyi na-egosi na iPhone 6s (Plus) ga-0.2mm okpotokpo karịa iPhone 6 (Fig. 2). Dabere na leaks, na mgbagha osisi yiri ka nta nke na-eme ụlọ incorporate ubé ibu batrị. Otú anyị nwere ike na-enweta a ubé ibu ndụ batrị.
Rumo nwere ya na ihuenyo size nke iPhone 6s (Plus) na-atụ anya ịnọgide na-5.5 sentimita asatọ nke bụ otu ihe ahụ dị hà iPhone 6 Plus. The iPhone 6s (Plus) na-atụ anya nwere wireless Nchaji nke ẹkenam na Apple Watch-eme ka ọ n'ezie adaba. Ndị na-erughị wires e nwere, mfe ndụ bụ. Dabere na leaked schematics, ọhụrụ ngwaọrụ na-atụ anya nwere thicker Chassis-eme ka ọ 0.2mm thicker na 0.15mm ogologo karịa iPhone 6 Plus.
Ọnwa ole na ole gara aga, Apple ama e nyere otu patent akpọ mgbanwe kọmputa ngwaọrụ site United States Patent na Trademark Office (USPTO). Ya mere, anyị nwere ike ikekwe nnọọ atụ anya ịhụ a mgbanwe iPhone na mgbanwe ụlọ na esịtidem components. E nwere otutu chepụtara na e sere n'elu gburugburu na-agụnye Touch ID a na-ewu n'ime ihuenyo nke ugbu a bi na-adịbeghị anya iPhones 'Home bọtịnụ.
Video Concepts nke iPhone 6s (Plus)
[Watch iPhone 6s (Plus) video echiche ebe a]
Nke a video enye a echiche banyere asịrị gburugburu iPhone 6s (Plus). iPhone 6s (Plus) ga-a nha ihuenyo nke 4.7 sentimita asatọ, mgbe iPhone 6s Plus ga-a nha ihuenyo nke 5.5 sentimita asatọ. The video mgbe ahụ na-aga na iji kwurịta otú iPhone nha ji dị iche na otú ọhụrụ iPhone ga-akara tụnyere ndị ọzọ iPhones nakwa dị ka otú na-eguzogide ọgwụ ndị iPhone ga-adị. Ọ na-nta banyere otú mfe ọ ga-pairing ọhụrụ iPhone 6s (Plus) na Apple iWatch na njirimara dị iche iche.
Gịnị ka ndị mmadụ na-ekwu?
Ndị mmadụ hụrụ n'anya na-video na e nwere ihe karịrị 5 nde ndị na-ele ya ruo ugbu a.
Nke a video egosi anyị a ọhụrụ iPhone na-ajụ ma ọ bụrụ na ọ bụ na-esote iPhone 6s (Plus). Mgbe ahụ, video okwu banyere nga agbasa iPhone nakwa dị ka imewe na igwefoto ụdịdị nke na-abịa iPhone. The video nkọwa sara mbara karị banyere ọtụtụ nke ọhụrụ leaks gburugburu ọhụrụ iPhone na ihe anyị maara banyere ya ruo ugbu a.
Ndị mmadụ hụrụ n'anya na-video n'ihi na ọ na-enyere ha maara na ihe banyere imewe na igwefoto atụmatụ nke ọzọ iPhone.
Nke a video okwu banyere akụkụ dị iche iche na anyị na-atụ anya na-esote iPhone nwere, si data ọsọ nnyefe otú mkpa ekwentị ga-abụ. Ndị mmadụ na-atụ anya na iPhone 6s (Plus) inwe ike elu shei na Force Touch mwekota; n'etiti ndị ọzọ.
A dị mkpirikpi video na-ama ama ndị na dị ka ọ na-enyere gị aka maara ihe nile banyere ọzọ iPhone 6s (Plus) ngwa ngwa.
Nke a video agba elu niile dị mkpa atụmatụ nke ọzọ iPhone. Nke a roundup atụmatụ niile na anyị maara na ma na ndị niile na asịrị gbara ya gburugburu na-esote iPhone.
Nke a bụ oké video mara banyere ọzọ iPhone-esi na gị ajụjụ zara.
Nke a video achikota niile atụmatụ ị ga-atụ anya na-esonụ iPhone. Ka ihe atụ, iPhone 6s (Plus) ga-abụ na-enwe ihe Ram ma ebe Apple adịghị igosipụta ahụ Ram na ya ngwaọrụ, n'ezie na anyị apụghị ịgwa ruo mgbe ọ bụ na anyị na-na-anwale ya. Ọzọ asịrị bụ na iPhone 6s (Plus) ga-mgbanwe - na iPhone 6 bụghị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a dị iche iche na-ahụ na ihe na-atụ anya n'aka nke ọzọ iPhone, nke a bụ ebe.
Nke a video okwu banyere ikpeazụ asịrị gbara ya gburugburu na-esote iPhone tupu igba egbe ọzọ ọnwa. Ka ihe atụ, iPhone 6s (Plus) na-atụ anya nwere mma processor. Anyị abụghị ndị na n'aka ka otú ukwuu ihe dị iche ga-abụ, ma ọ n'aka ga-ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ikpeazụ nkeji ọmụma na ihe na-atụ anya n'aka ọhụrụ iPhone, ị nwere ike ịlele a video.
Ebe a na Macworld otu eneme banyere ọhụrụ nile asịrị. Dị ka ọ bụ site Macworld, ị bụ n'aka ịhụ naanị credible ọmụma na onye na-ezi na-ahụ na ihe ị pụrụ ịtụ anya (na ike) si ọzọ iPhone. Ka ihe atụ, iPhone 6s (Plus) Plus ga nwere elu ndụ batrị karịa iPhone 6. Ọzọkwa, iPhone 6s (Plus) Plus na-atụ anya nwere wireless Nchaji.
Ndị mmadụ a n'anya video n'ihi na o nwere Macworld otu-ekwu banyere atụmatụ na oké ogologo na bụ oké eche nche.
Nke a video okwu banyere ọhụrụ iPhone 6s (Plus) na iPad Pro na Apple TV 4, na-ekwu banyere otú ha pụrụ isi iwekota na onye ọ bụla ọzọ. O kwuru okwu banyere otú Apple ngwaọrụ agbanweela ihe karịrị afọ.
Nke a bụ a ga na-ekiri ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ndị ọhụrụ na Apple ilekota.
Nke a video okwu banyere Force Touch ọhụrụ iPhone na otú ọ na-arụ ọrụ. The video bụ lucid na awade a doo anya na mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmatakwu banyere Force Touch atụmatụ, nke a bụ video.
Nke a video nta banyere reversible USB atụmatụ na-esonụ iPhone. Ọ na-okwu banyere otú ndị ọhụrụ 2A ike nkwụnye ọrụ na otú i nwere ike iji USB atụmatụ.
N'ihi na ndị na-achọ ịmatakwu banyere reversible USB atụmatụ na otú ọ na-arụ ọrụ, nke a bụ video na-ekiri.
Lee ndị video kwuru na m hụrụ na-akpali:
[Cheta na: Nnọọ ole na ole kwuru na Web bụ uru.]
1. "Ọ bụ ezie iOS bụ ịtụnanya na ijikwa Ram, na-esiri m a n'ezie welcome mgbanwe ka okpukpu abụọ Ram, ebe ọ bụ na ọ na-eji 90% kasị a otutu oge." - Nahid Islam
1. "M dị chọpụtara na" 6S "ụda a otutu dị ka" Ịga nke Ọma ". Olileanya ha na-eji na pun na keynote!" - Chris Cringle
2. "Ọ bụrụ na Apple upgrades na 6S ka 2GB nke Ram na-akpọ ụkwụ igwefoto-12 mp na af 1.8 ma ọ bụ 1.9 aperture dị ka ị kwuru ọ pụrụ ịbụ a nnọọ uru kwalite ka Apple ọrụ." - Rob Wakins
> Resource> iPhone> Full Video Concepts nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus